घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू फ्रेन्च फुटबल खेलाडीहरू विलियम सलिबा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो विलियम सलीबा बायोग्राफीले तपाईंलाई उनको बचपन कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुनु, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँछ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो सलीबाको जीवन कथा हो। हामी उनको बाल्यकालदेखि सुरु भयो जब उहाँ प्रसिद्ध हुनुभयो। तपाईको आत्मकथा भूखलाई छेड्न, वयस्क ग्यालेरीमा उनको बाल्यकालको जाँच गर्नुहोस् - विलियम सलीबाको बायोको एक सारांश।
विलियम सलीबाको संस्मरण। उहाँको जीवन र उठ हेर्नुहोस्।
के गर्छ माइकल अर्टेटा उसको प्रोफाइलमा अवलोकन गर्नुहुन्छ? उनी किन उनीहरुसंग गनर्स डिफेन्सको भविष्य हुन चाहन्थे? अन्तमा, किन फ्रान्सेली र आर्सेनल फ्यानहरू विश्वास गर्छन् कि सलीबा बीचमा स्थान पाउने सम्भावना छ विश्व फुटबलमा 50० महान डिफेन्डरहरू। हामी तपाईंलाई उसको अविश्वसनीय जीवन कहानी पछाडि आश्चर्यजनक सत्यहरू प्रस्तुत गर्ने रूपमा पढ्नुहोस्।
विलियम सलिबा बाल्यकाल कहानी:
जीवनी शुरुवातकर्ताहरूको लागि, उनका पूरा नामहरू विलियम अलेन आन्द्रे गेब्रियल सलीबा हुन्। विलियम सलीबाको जन्म मार्च २००१ को २th औं दिन क्यामेरोनियाकी आमा र फ्रान्सको उत्तरपूर्वी उपनगरहरू बन्डिमा रहेको लेबनानीका बुबासँग भयो।
विलियम सलिबाका अभिभावकहरूको पहिचानलाई उदा .्ग पार्ने प्रयासमा हामीले फुटबलरको आमाको मायालु पाखुराको काखमा आरामसँग बसेको एउटा दुर्लभ बाल्यकालको फोटो उठायौं।
विलियम सलीबाको एउटा दुर्लभ बाल्यकालको फोटो उसको आमाको न्यानोपनको आनन्द उठाइरहेको छ।
सानो बच्चाको रूपमा, सलिबाले फुटबलमा आफन्तको चासो जगाउन थालिन्। के तपाईंलाई थाहा थियो?… उहाँ आफ्नो शुरुआती दिनहरूदेखि नै एक डाइ-हार्ड गनर फ्यान हुनुहुन्थ्यो। सत्य के हो भने, कसैले पनि विलियम सलिबाका परिवारका सदस्यले कल्पना गरेकै थिएन कि जवान केटाले आफूले मन पराउने क्लबको लागि खेल्नेछ। चित्रहरु वास्तवमा, झूट छैन भन्न।
के तिमी उसलाई चित्रमा देख्न सक्छौ? ऊ बाल्यकालदेखि नै आर्सेनलसँग सधै माया गर्दै थियो।
अब, तपाईंले यो महसुस गर्नुभयो कि क्लब बाल्यकालदेखि नै सलिबाको फुटबल जुनसुकै चालक हो। सानो बच्चाको रूपमा हुर्किएपछि, विलियम सलिबाका आमा-बुबाले उनलाई आर्सेनल जर्सी उपहार दिए, जसले उनलाई खुसी बनायो (माथि देखाएझैं)। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, जर्सी उसको मनपर्ने बचपनको कपडा बन्यो किनकि तपाईंले उसलाई साथीहरूसँगै यात्रा गर्दा यो पहिरिएको याद गर्नुभयो।
विलियम सलीबा परिवार मूल:
उसको पुर्खा जरामा खनेपछि हामीले पत्ता लगायौं कि उसको पैतृक उपनाम "सलीबा" लेबनानको मूलका हो। यद्यपि उनको बुबाको वंश वा जातीयताको बारेमा कुनै आधिकारिक मान्यता दिइएको छैन। यद्यपि हामी पूर्ण रूपमा विश्वास गर्छौं कि विलियम 'सलिबाका बुबा लेबनानी सम्पदामा छन्।
अर्कोतर्फ, फुटबलरको पश्चिमी अफ्रिकी मातृ वंश छ। विलियम सलिबाकी आमा विशुद्ध क्यामेरोनियन मूलका हुन्। हामीले यस अघि उनको बाल्यकालको फोटोमा हेरेका थियौं कि यसले उनको आमाको कालो रंग रहेको छ - जुन उनको अफ्रिकी सम्पदाको स्पष्ट प्रमाण हो।
एक नक्शा विलियम सलिबाको परिवारको मूलको व्याख्या गर्दछ - उनको बुबा र आमाको पक्षबाट।
विलियम सलिबा परिवार पृष्ठभूमि र क्यारियर निर्माण:
पहिलो, उहाँ एक सुपर धनी घरमा जन्मनुभएको थिएन। सलीबा मध्यमवर्गीय पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् भन्ने तथ्यलाई मानी अन्य बच्चाहरूसँग खेल्दै सडकमा दौडन पाउने सम्भावना सधैं नै थियो।
जहिले पनि, जब उसका साथीहरूले फुटबलसँग सम्बन्धित छलफल ल्याउँदछन्, जवान केटाले निर्भयतासाथ आर्सेनल एफसीको लागि आफ्नो गहिरो स्नेह घोषणा गर्दछ र यसलाई बहस जित्न प्रयोग गर्‍यो। यहाँ उनले एक अन्तर्वार्ताका बखत गनरको मिडियालाई भनेको कुरा हो;
"म सानो छँदादेखि आर्सेनलको ब्याज र हिस्ट्रीसँग प्रेम गर्छु र म क्लबलाई विभिन्न टूर्नामेन्टमा प्रदर्शन गर्दैछु।"
Kylian Mbappe बुबा बाट मद्दत:
विगतका केही वर्षहरूमा, बन्डीले एलिट फुटबल ताराहरूको राम्रो संख्या प्रदान गर्यो। विलियम सलीबालगायत उनीहरूमध्ये धेरैले फुटबलको संसारमा डुब्न सजिलो पाएका थिए, उनीहरूको परवरन - बोर्डीको उत्तरपूर्वी उपनगरहरूमा बृद्धि भएकोमा धन्यवाद।
छ वर्षको उमेरमा, त्यस केटोले सडक फुटबल खेल्न सुरु गर्यो। भाग्यवस, उनको शैली Kylian Mbappe बुबा, विल्फ्रेड को आँखा आकर्षित। सलिबाले उत्कृष्ट स्टार बन्ने सम्भावना रहेको कुरा राम्ररी जानिसकेपछि, विल्फ्रेडले उसलाई आफ्नो पखेटामुनि लगे। त्यसकारण उनले सलिबालाई बन्डी एकेडेमीमा भर्ना गरे जहाँ किलियन एमपीपी उनको सब भन्दा पहिलेको फुटबल पाठ प्राप्त गरेको थियो।
के तपाईंलाई थाहा छ?… विल्फ्रेडले एएस बन्डीमा छ वर्ष साना सलीबा कोचिंग र प्रशिक्षण खर्च गरे। त्यतिखेर, सालिबा प्रायः क्यालिआनको घर आउँथिन् किनभने उनीहरू एउटै स्कूलमा पढेका थिए। सलिबाले तालिम लिन जारी राख्दा उसको फुटबलको क्षमतामा पनि सुधार आयो। यहाँ उनले आफ्नो पहिलो फुटबल कोचको बारेमा के भने;
"विलफ्राइडले मलाई सबै कुरा सिकाउनुभयो र मेरा उपलब्धिहरू उहाँबाट सिकेको कुरालाई दिन सकिन्छ।"
आफ्नो प्रारम्भिक फुटबल कोच, Wilfred, र आफ्नो बाल्यकाल क्यारियर प्रेरणा, Kylian भेट्नुहोस्।
कुनै टाढा समयमा, सलीबा एएस बन्डी छोडे र एफसी मोन्टफर्मिलमा सामेल भए। मोन्टफर्मिल आइपुगेपछि, सलीबाले आक्रमण गर्ने भूमिका लिइन्। तर स्थिति मा प्रभावी प्रदर्शन गर्न उसलाई गाह्रो लाग्यो। तसर्थ, ऊ जवानीमै छँदा ऊ डिफेन्डरमा बदल्यो।
विलियम सलिबा रोड फेम बायो गर्न:
सफलताको भर्या .बाट अघि बढ्नु सलीबाले कल्पना गरेभन्दा गाह्रो भयो। सुरुमा उनले मोन्टफर्मिल सेन्ट इटिएनको लागि छोडे र उनीहरूको U-१ 17 छेउमा सामेल भए। यो सेलिबा लगातार सेन्ट Etienne को माध्यम बाट बढ्न तालिम लिए।
कम्तिमा उनीहरूसँग सामेल भएको एक बर्ष पछि, उनले उनीहरूको उमेर १ side पक्ष र त्यसपछि वरिष्ठ टोलीमा पदोन्नति देखे। आफ्नो जीवनको यस घडीमा, सलिबाले १ 19 वर्षको उमेरमा सेन्ट-इटिनसँग पहिलो व्यावसायिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने जीवन परिवर्तन गर्ने सुअवसर प्राप्त गरे। अघिल्लो फोटोलाई बिर्सनुहोस्, यस पटक उनी Mbappe भन्दा पनि अग्लो र ठूला भइसकेका थिए।
विलियम सलिबा सफलता कहानी:
लगभग पहिलो एक वर्ष पहिले आफ्नो पहिलो व्यावसायिक सम्झौतामा हस्ताक्षर, सलीबा फ्रान्स को U-16 पक्ष को लागी शुरूआत। धन्यबाद, उनको फुटबल प्रवीणता फ्रान्सेली सकर को U-17 र U-20 मा आफ्नो स्लट सीमेन्ट।
के तपाईंलाई थाहा छ?… सलिबाले जुलाई २०१२ मा आर्सेनलसँग २£ मिलियन डलरको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो। अचम्मको कुरा, सम्झौताको अवधिमा सलिबाले सेन्ट-इटिएनसँग २०२० मा गनर्ससँग पुन: सामिल हुनु अघि २०१-27-२०१ season सिजनको लागि loanणमा रहनेछ भन्ने तथ्य समावेश गर्दछ।
यो जीवनी लेख्ने क्षणमा छिटो अगाडि, युवा डिफेन्डर एक राम्रो कार्यक्रम राख्न आर्सेनलमा फर्किएको छ। चाखलाग्दो कुरा, माइकल अर्टेटा सलिबा र। सँग आफ्नो रक्षा लाइन मजबूत गर्ने एक शानदार रणनीतिको साथ आएको छ गेब्रियल Magalhaes, जो भर्खर उसको पक्षमा सामेल भयो। बाँकी, हामी पावर हाउसको रूपमा भन्छौं, अब इतिहास हो।
साथी डिफेन्डर, गब्रिएल सँगसँगै, तिनीहरू निश्चित रूपमा प्रशंसकहरूको लागि एक उत्कृष्ट कार्यक्रम राख्नेछन्।
विलियम सलीबा प्रेमिका को हो?
मलाई पक्का छ कि पूर्व सेन्ट-एटिएन म्यानको दृश्यले उसको सम्बन्ध जीवनको बारेमा धेरै प्रश्नहरू खडा गरेको छ। धेरै मानिसहरू ह्यान्डसम विलियम सलीबाको प्रेमिका को हुन् भनेर धेरै उत्सुक छन्।
मानिसहरूले सोध्न थालेका छन् ... के विलियम सलीबाको श्रीमती वा प्रेमिका छ?
माथिको कुरा गर्दै, त्यहाँ कुनै तथ्यलाई इन्कार गरिरहेको छैन कि उहाँ महिलाको लागि ए-लिस्टर हुनुहुन्न जो आफ्नी प्रेमिका, पत्नी वा आमा आफ्ना बच्चाहरू हुन चाहानुहुन्छ।
उसको उचाईको बारेमा बिर्सनुहोस्, सलीबा अझै जवान छिन। यस समयमा उहाँ पूर्ण रूपमा आफ्नो स्तरसम्म काम गर्न प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ प्रीमियर लिग एराको सर्वश्रेष्ठ आर्सेनल डिफेन्डर। तसर्थ, प्रशंसकहरु लाई उनको प्रेमिका देखाउने आवश्यकता अन्तिम चीज हो जुन उनी चिन्तित छन्।
जीवनको फुटबलरले आफ्नो परिवारको सहयोग र समर्थनका लागि नभई फरक बाटो अपनाउँदछ। तसर्थ, हामीले विलियम सलिबाको परिवारको बारेमा आफ्ना बाबुआमाबाट शुरू हुने विस्तृत जानकारीको एक टुकडा संकलित गरेका छौं।
विलियम सलिबा बुबा र आमाको बारेमा:
आर्सेनल डिफेन्डरले उनलाई प्रशिक्षण दिनका लागि काइलीयनका बुबाप्रति आभार व्यक्त गर्दछन्, उनलाई हुर्काएकोमा उहाँ आफ्ना बाबुआमाको सदैव आभारी हुनुहुनेछ। के तपाईंलाई थाहा छ?… विलियम सलिबाको बाल्यकाल उनकी आमाको न्यानो कम्पनीको कारण एक्लै थिएन। केवल समयले सलीबा र उसको बुवा बीचको सम्बन्ध प्रकट गर्दछ।
उनको महिलालाई - उनको आमालाई धन्यवाद, सलीबा हुर्केका युवा मानिस मध्ये एक हुर्किए।
विलियम सलीबाका भाई बहिनीहरूको बारेमा:
आधिकारिक रूपमा, फ्रान्सेली डिफेन्डर कसैले पनि आफ्नो भाइ वा बहिनी को रूप मा सम्बोधन गरेको छैन। यद्यपि, उहाँ स्न्यापशटमा (तल देखाइएको छ) कालो रंगको साना केटीसँग बचपनका दिनहरूमा समातियो। तसर्थ, त्यहाँ विलियम सलिबा कम्तिमा एक बहिनी छ कि एक सानो सम्भावना छ।
के उनी सलीबाकी बहिनी हुन सक्छिन्? जब उहाँ अझ प्रख्यात हुनुहुनेछ तब उहाँ सायद उनीहरूको सम्बन्धको बारेमा बोल्नुहुनेछ
विलियम सलीबाका आफन्तहरूका बारे:
सलिबाका बुवा र आमा बुवा हजुरआमाको पुर्खाको अस्पष्टताको कारण कुरा गर्न गाह्रो छ। उनको गोपनीयता कायम राख्न फ्रान्सका फुटबलरले आफन्तहरूका बारे मौन राखेका छन्। त्यसकारण, सलिबा काका र काकीको बारेमा कुनै जानकारी छैन।
विलियम सलीबा व्यक्तिगत जीवन:
सबैभन्दा पहिला, उहाँलाई आफूले माया गर्ने चीजहरूप्रति हार्दिक अनुकम्पा छ। यो विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, जवान भावनात्मक छ र यसमा कुनै छक्कलाग्दो कुरा छैन कि ऊ चाँडै विभिन्न परिस्थितिहरूमा आफ्नो कृतज्ञता वा माफी व्यक्त गर्न उत्प्रेरित हुन्छ।
उनको जन्मकुण्डलीको बारेमा कुरा गर्नुहोस्, र तपाइँले फेला पार्नुहुनेछ कि सलीबा मेष राशि चक्रको गुण हो। धेरै व्यक्तिहरू उसको गोप्य प्रकृतिका कारण ऊ अनौंठो लाग्छ। जे होस्, उसको पूर्व टीमका साथीहरूले यो तथ्यलाई प्रमाणित गरे कि उनी एकदम रमाईलो-चरित्रको थिए जो उनी भन्दा बढी जीवन्त देखिन्छन्।
विलियम सलीबा जीवनशैली:
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, भर्खरै प्रसिद्ध भएको जवान केटाले एक टन आर्थिक कार्यवाही गरीरहेको छ। सालिबाले पनि उनको जीवन कहानी अथाह धनले सम्पन्न हुनेछ भन्ने कुराको कल्पना गरेन।
यो जीवनी लेख्ने क्रममा विलियम सलिबाको नेट वर्थको बारेमा बिभिन्न मतहरू छन्। यद्यपि सोफिफाले आफ्नो बजार मूल्य करीव २€..24.5 मिलियन डलर अनुमान गर्छ। हाम्रो सलीबाको बायोसँग साप्ताहिक, मासिक र वार्षिक तलबको ब्रेकडाउन छ- यस्तो उपलब्धि जसले तपाईंलाई उसको नेटवर्थ निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ।
विलियम सलिबाको कार र सम्पत्ति:
विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, फ्रान्सेलीसँग महँगो घर र केहि विदेशी अटोहरू छन्। विलियम सलिबाको विकल्पको कार मर्सिडीज हो। सत्य यो हो कि उहाँसँग विलासी जीवनशैली बिताउने इच्छा छ। यद्यपि युवा फ्रान्सेली स्टारले आफ्ना सम्पत्तिहरू प्रदर्शन गरेर खुशी पार्दैन।
विलियम सलिबा तथ्यहरू:
हाम्रो बायो लपेट्न, यहाँ केहि तथ्यहरू छन् जुन तपाईंलाई सकर जीनियसको पूर्ण ज्ञान लिन मद्दत गर्दछ।
तथ्य # १: विलियम सलिबा वेतन ब्रेकडाउन र प्रति सेकेन्डको आय:
प्रति महिना £ 173,600 € 188,859 $ 223,883
प्रति हप्ता £ 40,000 € 43,516 $ 51,586
प्रति दिन £ 5,714 € 6,217 $ 7,369
प्रति घण्टा £ 238 € 259 $ 307
प्रति मिनेट £ 3.97 € 4.32 $ 5.12
प्रति सेकेन्ड £ 0.07 € 0.07 $ 0.09
यो अविश्वसनीय छ कि औसत बेलाइती नागरिकले आर्सेनलसँग सलिबाको मासिक तलब कमाउन चार बर्ष र पाँच महिना कडा र अथक प्रयास गर्नुपर्नेछ।
दोस्रो, हामीले रणनीतिक हिसाबले उसको ज्यालाको विश्लेषणलाई घडीको टिकटमा राखेका छौं। तपाईको लागि पत्ता लगाउनुहोस् कि यहाँ आउँदादेखि ठूलो मान्छेले कति कमायो।
यो के हो विलियम सलिबाले तपाईको बायो पढ्न सुरू गरेको मात्र कमाएको छ।
तथ्य # २: विशेष व्यक्तिले उसलाई मन पराउछ:
लामो समयसम्म, Jose Mourinho सलिबालाई मनपर्‍यो। यदि यो थिएन कि आर्सेनल उसको बाल्यकाल क्लब हो भने उसले स्पेशलको साथ काम गर्न रुचाउने थियो। एक पटक, मोरिन्हो एक पटक टिप्पणी गरे कि;
"विलियम सलिबासँग उत्कृष्ट खेलाडी हुन सबै शस्त्रागार छ, जस्तो कर्ट Zouma, मैले [सेन्ट-इटिएनबाट] हस्ताक्षर गरे।
किनकि उहाँ अझै जवान हुनुहुन्छ, सलिबा फुटबलको शक्ति धेरै जस्तै प्रदर्शन गर्न को क्षमता संग भंडार गरिएको छ निक्लास सुले। फेरि, FIFA प्रशंसकहरूले उहाँलाई एक फ्रान्सेली डिफेन्सिभ ट्राइपोरसँगै हेर्नको लागि कुर्दैन Dan-Axel Zagadou र इब्राहिमा कोनाटे। वास्तवमा, फिफामा उनको विशेषता पक्कै पनि उनी एक ठोस युवाहरूको एक बनाउँछ क्यारियर मोडमा साइन इन गर्नका लागि।
विलियम सलीबाको विकी:
उसको बायोको द्रुत सारांश प्राप्त गर्न कृपया तलको तालिका प्रयोग गर्नुहोस्।
पुरा नाम: विलियम अलेन आन्द्रे गेब्रियल सलीबा
निक नाम: नयाँ लिलियन थुरम
जन्म मिति: XNUM X मार्च 24
जन्मस्थान: बन्डी, फ्रान्स
मासिक तलब: £ ,40,000०,००० (प्रति हप्ता)
बजार मूल्य: € 24.5 मिलियन
वैवाहिक स्थिति: एकल (२०२० को रूपमा)
उचाइ: १.1.92 मी - मीटरमा
′ ′ १० ″ - खुट्टामा
अक्सर, हाम्रो गहिराइमा बाल्यावस्थाको इच्छा र आकांक्षा सफल जीवनीहरूको निर्माण ब्लक हुन सक्छ। लगभग सबैको बाल्यकालको सपना हुन्छ; जहाँसम्म, केवल केहि व्यक्तिहरू जस्तो भाग्यशाली हुन्छन् उनीहरूको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न। हामी विलियम सलिबाका आमा बुबा र किल्यान म्ब्प्पीका बुवालाई तिनीहरूको जीवनमा उनीहरूको भूमिकाको लागि श्रेय दिन्छौं।
अन्तमा, हामी Lifebogger तपाईको विलियम सलीबाको बायो पढ्नमा खर्च गरेको समयको लागि धन्यवाद दिन्छौं। कृपया फ्रान्सेली डिफेन्डरको बारेमा तपाईंको राय हामीलाई बताउनुहोस्।